192.168.8.1-Setha kwakhona iRouter yakho kwiiSeto eziNgagqibekanga
Unganqwenela uku Cwangcisa umzila wakho kuseto olumiyo ukuba awulikhumbuli igama eligqithisiweyo lomlawuli, ngekhe ulikhumbule iqhosha lokhuseleko lwenethiwekhi, okanye unengxaki yokujongana neengxaki zonxibelelwano.
Le ndlela ingezantsi ayifani nokuqala kwakhona imodem okanye umzila.
Iindlela ezahlukeneyo zokusetha kabusha iRouter - Unzima, uthambile, umboniso wamandla eBhayisikile
Iindlela ezilungileyo zokusetha kwakhona iiRouters
Iindlela ezahlukeneyo zokusetha kabusha umzila zinokusetyenziswa zixhomekeke kwimeko. Ngokuqhelekileyo kucetyiswa ukuseta kwakhona okunzima, ukucwangcisa kwakhona okuthambileyo kunye namandla okuhamba ngebhayisikile.
Ungayibuyisela njani kwakhona iRouter yakho ukuya Imimiselo emiselweyo
Ukuseta kwakhona okunzima
Ukusetha kwakhona okunzima lolona hlobo luchanekileyo lokuseta kwakhona i-router kwaye ihlala isetyenziswa ngelixa umlawuli engaphumelelanga ukukhumbula amaqhosha okanye igama eligqithisiweyo kunye neminqweno yokuqalisa kwakhona ngoseto olutsha.
Ukuseta kwakhona nzima akubuyisi okanye kususe uguqulelo lwefowuni ye-firmware. Ukuthintela iingxaki zonxibelelwano lwe-intanethi, khetha imodem ebanzi kunye nomzila ngaphambi kokwenza ukuseta kwakhona okunzima.
Ukwenza useto olunzima:
Tshintshela kwi-router, uyijike kwicala elineqhosha lokusetha kwakhona. Isitshixo sokusetha kwakhona sisezantsi okanye ngasemva.
Ngomzuzu othile kwaye ubukhali, njenge-toothpick, ibambe iqhosha lokuseta kwakhona kwimizuzwana engamashumi amathathu.
Mahala iseti yesitshixo kwaye ulinde imizuzwana engamashumi amathathu ukuba i-router isete kwakhona ngokupheleleyo kunye namandla kwakhona.
Indlela yokubambela kukusetha nzima ukuseta 30-30 ukuya ku-30 ​​okubandakanya ukutyhala isitshixo sokusetha ngokutsha amashumi alithoba kunamashumi amathathu kwaye kunokuzanywa ukuba eyona 30-yesibinistypedoes ayisebenzi.
Abadali abaninzi be-router banokuba nendlela efanelekileyo yokusetha kabusha i-router, kunye nezinye iindlela zokubuyisela i-router kwakhona ziyahlukahluka kwiimodeli.
Ukuhamba ngebhayisikile yamandla
Cima kwaye ucime amandla erutha eyaziwayo njengamandla okuhamba ngebhayisikile. Isetyenziselwa ukubuyela kwiingxaki ezibangela ukuba i-router iyeke ukudibanisa umzekelo ukwenzakala kwimemori yangaphakathi yeyunithi okanye kushushu. Imijikelezo yamandla ayisusi amaphasiwedi agciniweyo, ezinye iisetingi ezigciniweyo okanye amaqhosha okhuseleko, kunye nedashboard yedrabha.
Kumjikelo wamandla umzila:
Cima amandla erutha. Cima kwakhona iqhosha laMandla okanye ususe iplagi yamandla.
Susa ibhetri kwii-routers ezinikwe ibhetri.
Abantu abaninzi balinde imizuzwana engamashumi amathathu ngaphandle kokuziqhelanisa; okwangoku ayifuneki ukuba ulinde ngaphaya kwemizuzwana phakathi kokuqhawula kunye nokufaka kwakhona iplagi yamandla erutha. Kodwa ngokuseta kwakhona okunzima, ukuqala kwakhona ukusebenza kwe-router kuthatha ixesha ukubuya kwamandla.
Ukusetha kwakhona okuSoft
Ngelixa usombulula ingxaki kuxhulumaniso lweintanethi, inokunceda ukuseta kwakhona ikhonkco phakathi kwemodem kunye nerutha. Oku kunokubandakanya ukunxibelelanisa unxibelelwano ngokwasemzimbeni phakathi kwezi zimbini, hayi ukulawula isoftware okanye ukumisa amandla.
Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zokuseta kwakhona, ukuseta kwakhona okuthambileyo kusebenza ngokukhawuleza njengoko kungafuneki ukuba i-router iqale kwakhona.
Ukwenza ukuseta kwakhona okuthambileyo, cima intambo eqhagamshela i-router kwimodem, emva koko udibanise kwakhona emva kwexesha elithile. Zimbalwa iiroutha ezinendlela engaqhelekanga yokwenza ukuseta kwakhona okuthambileyo:
Khangela iqhosha lokuQhawula / lokuDibanisa kwideshibhodi. Oku kucwangcisa kwakhona ikhonkco phakathi komboneleli ngenkonzo kunye nemodem.